Famatsiana solika Karohana ireo mpanaparitaka vaovao tsy marina
Lamandy eto Antananarivo Maro ny mponina manohana, hoy ny ben’ny tanàna
Efa nivoaka ofisialy izao ny CMH, izay anisan’ny tetikasa lehibe nataontsika ho an’Antananarivo.
Haitranon’ny mpianatra teny Ankatso II Miantso vahaolana azo tsapain-tanana ny Seces
Eo anatrehan’ny loza nitranga tao Ankatso II, Oniversiten’ Antananarivo ny 19 Septambra 2020 ka nahamay ny Bloc Amicale fonenan’ny mpianatra eny amin’ny anjerimanontolo dia mankahery sy miombom-pahasahiranana tanteraka amin’ireo niharam-boina ny SECES sampana Antananarivo,
Minisiteran` ny fitsarana “Niasa hatrany na nisy aza ny aretina”
“Na nisy aza ny valanaretina Covid 19 dia nanohy ny fomba fiasa maro samihafa ny minisiteran` ny fitsarana. Ao ny fametrahana rafitra maro samihafa ka amin` ity volana septambra ity dia mieritreritra hampiditra amin` ny filankevitry ny minisitra “avant projet de loi” miisa 3 ary “avant projet de décret”
Karana nisy namono teny Ivandry Ahiana ho misy ambadika avo lenta
Maty nisy namono teny amin’ny La City Ivandry “sous-sol” an’ny Parking eny an-toerana ny sabotsy teo tokony ho tamin’ny 8ora alina latsaka fahefana teo I Dani Radjan,
Fandaminana ny ady tany Miara-miasa akaiky ny fitsarana sy ny fananan-tany
60% amin` ny raharaham-pitsarana dia ady tany avokoa. Mizara roa izany raha ny tatitra voaray: ady tany tsotra, izany hoe fifanolanana eo amin`ny samy mpandova na koa tany misy nivarotra fanindroany, …
Tavoahangy plastika An-taoniny maro isan’andro ireo tonga eny Andralanitra
Ny tavoahangy plastika amin’ny ankapobeny no tena manentsina ireo karazana lakan-drano eto amintsika ka mahadifotra tanana maro amin’ny faritra iva rehefa fotoam-pahavaratra.
Ravelonanosy Bruno Nolavin’ny Fitsarana ny fangatahana fahafahana vonjimaika
Omaly no niakatra teny amin’ny Fitsarana ilay fangatahana fahafahana vonjimaika ho an-dRavelonanosy Bruno naiditra am-ponja ny 03 jona lasa teo noho ilay raharaha ady tany eny Antanandrano Ambohitrarahaba mirefy 34 ha.
Hatramin'ny volana oktobra, 20 mahery ny isan' ireo antontan-taratasy efa nalefa eo amin'ny rafitra miady amin'ny heloka fampiasana fitaovan-tserasera noho ny fanelezana vaovao tsy marina.
Miisa 2 na 3 isan’andro no fantatra fa voarain'ity rafitra ity. Tao anatin’ny volana maromaro dia mitobaka eo anivon'ny tambajotra serasera ny famoahana vaovao tsy marina entina hanakorontanana saim-bahoaka. Ny fampiasana kaonty tsy tena izy na "compte fake" no fomba hamoahan'ireo olona ireo izany vaovao izany. Azo arahina anefa izany "compte fake" izany, hoy ity rafitra ity amin'ny alalan' ny fanadihadiana ataon'ny manampahefana. Tranga farany dia iny fanelezana tsaho teo amin' ny famatsiana solika eto an-drenivohitra izay niteraka fanakorontanana firenena. Efa miroso amin'ny fikarohana ny atidoha mikotrika iny raharaha iny. Tsiahivina fa fampidirana am-ponja 6 hatramin'ny 10 taona sy fandoavana lamandy 600 000 ariary hatramin'ny 1 080 000 ariary no vesatra amin'ireo izay minia manao izany, araka ny voalazan'ny lalàna eo amin'ny andininy faha-19.